Madaxweyne Xasan Sheekh oo dalka dib ugu soo laabtey – idalenews.com
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh iyo waftigii uu hogaamiyey ee maalmihii danbe ku sugnaa magaalada London ee caasimadda dalka UK ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay,madaxweynaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey masuuliyiin uu horkacayey gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Csmaan Jawaari.
Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya ahna la talihaya madaxweynaha Inj. C/raxmaan Cumar Yariisow oo warbaahinta shir jaraa’id ugu qabtay xarunta madaxtooyada Villa-Soomaaliya ayaa ka warbixiyey socdaalkuu uu madaxweynuhu 2-adii maalmood ee u danbeeyey ku joogay magaalada London.
Afhayeenka madaxtooyada ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ka qaybgalay xaflad ay qabatay Boqoradda dalka Ingiriiska halkaasne uu kula kulmay madax badan oo kasoo qaybgalay xafladaas kuwaas oo uu kala hadlay arimaha dalka Soomaaliya,wuxuuna sidoo kale sheegay Inj. Yariisow in madaxweyne Xasan Sheekh uu la kulmay R/wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii UK ay kor ugu qaadi lahayd taageerada ay siiso Soomaaliya.
Inj. Yariisow ayaa intaa ku daray in madaxweyne Xasan Sheekh uu London kaga qaybgalay shirkii horudhaca u ahaa Shirka wadamada G8-ka,wuxuuna tilmaamay in madaxweynuhu uu shirkaas ka jeediyey Khudbad uu uga warbixinayey marxaladda Soomaaliya,iyo waxyaabaha ay u baahan tahay in laga gacan siiyo xiligan.